करोडपति बन्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ नेपोलियनको करोडपति बन्ने तरिका ! – Online Marg
करोडपति बन्न चाहनुहुन्छ ? यस्तो छ नेपोलियनको करोडपति बन्ने तरिका !
Posted on Monday, January 27th, 2020 10:21 PM Monday, January 27th, 2020 10:25 PM by अनलाइनमार्ग डट कम डेस्क
तपाईको मष्तिष्कमा कुन प्रतिभा सुतेको छ ? के तपाई करोडपति हुने कल्पना गर्न सक्नुहन्छ ?
सायद, सक्नुहुन्न होला किन ? किनकी, अरुले पागल भन्लान भन्ने डर छ वा आफैमा विश्वास छैन, तपाईलाई । तपाईको वर्तमान अवस्था हिजोको तपाईको कल्पनाको परिणाम हो अनी आज जे कल्पीनु हुन्छ त्यो तपाईको भोलिको यथार्थ हुनेछ भन्ने अकाट्य सत्य तपाईलाई थाहा नभएर नै हो ।
कतै तपाईको हालत त्यो कस्तुरीको जस्तै त छैन जो आफैभित्रको सुगन्ध नचिनेर रनवन चाहारीरहन्छ । तपाई आफै सम्बृद्धिको भण्डार हुुनुहुन्छ त्यसैले सोचनुहोस् अनि सोचेजति धनि बन्नुहोस किनकी तपाईको ‘मानसिक क्यामेस्ट्री’ले जादु जस्तै काम गर्दछ । सफलता कुनै ब्यक्तिको इच्छाबाट सुरु हुन्छ । यो पूर्णरुपले मानसिक स्थितिमा भर पर्दछ ।
थोमस एडिसनले एक यस्तो बल्वको कल्पना गरे जुन विजुल्लीबाट जल्यो र भौतिक स्वरुप बदलियो ।
राइट दाजुभाइले यस्तो मेसिनको कल्पना गरे जुन हावामा उड्न सकोस । आज हामी संसार भरिमा प्रत्यक्ष देख्न सक्छौं । मार्कोनीको कल्पनाका कारण संसार भर रेडियो, टेलिभिजन आदि उपकरणमा वायुको अन्जान शक्ति प्रयोग भयो ।
डब्लु क्लिमेन्ट स्टोन जसले १०० डलरलाई करोड डलरमा बदलिदिए किनकी सफलताको इच्छा र धनी बन्ने सोच्नुपर्छ भन्ने शिद्धान्तमा उनी अडीग थिए । आज उनको बार्षिक आम्दानी ३.५ करोड डलर छ । -नेपोलियन हिलको पुस्तक सोच्नुहोस र धनी बन्नुहोसबाट साभार
Posted in जीवन बदल्ने मार्ग
महिला र पुरुषमा को हुन्छन् बढी धो’केबा’ज ?
सम्बन्धमा धोका नखाने सायदै होलान्। चाहे महिला हुन् वा पुरुष सबैले धोका खाए�
तपाई चिन्ता लिनुहुन्छ ? यो पढेपछि कहिल्यै लिनुहुन्न !
युवाको मन चञ्चल हुन्छ । उनीहरु जव बाटोमा हिँड्छन् रुखका हाँगाहरु �
तपाईंको हातमा पैसा टिक्दैन हो ? यो पढ्नुस, तपाईको पर्स कहिल्यैँ रित्तो हुनेछैन् !
अहिले मानिसहरुलाई सताउने मध्ये एउटा कारण हो कमाइ। मानिसलाई कमाइल
सधैं खुसी रहने १० उपाय !
प्रत्येक दिन १० देखि ३० मिनेट हिँड्ने गर्नुपर्छ । हिँड
को हुन् पृथ्वीनारायण शाह ? (संक्षिप्त जीवनी पढ्नुहोस्)
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म पौष २७ गते १७७९ विक्रम स
असल पत्नी परे जीवन सुखमय, खराब परे म जस्तै दार्शनिकः सुकरात
संसारकै चर्चित दार्शनिक सुकरातका धेरै चेलाहरु थिए �
कसरी बाँच्ने आनन्दित जीवन ?
जीवन बिताउनु र जीवन बाँच्नु फरक कुरा हुन् । जीवन कस�
जीवन बदल्ने मार्गः धैर्य बिना सफलता असम्भव !
जीवनलाई सुखी र सफल बनाउनका लागि गरुड पुराणमा थुप्रै नीति बताइएका �
सफल हुनका लागि मनन गर्नुस् जीवन बदल्ने यि १०० भन्दा भनाईहरु !
1)मेरो एउटा पनि सत्रु छैन, सत्रु देख्यो कि मैले सिध्याइहाल्छु उसलाई साथी बना�
पुरुषलाई लाजमर्दो बनाउँछन् यी कुराले, बच्न यसो गर्नुस्
पुरुषहरूलाई कैयौं कारणले लाजमर्दो स्थितिमा पु–याउँछन् । कतिपय प�